Xog gaar ah: Musharaxiin la yimid hab cusub oo lagu ogaanayo Xildhibaanku qofka uu u codeeyey. • Horseed Media
You are here: Home / Featured / Editorial / Xog gaar ah: Musharaxiin la yimid hab cusub oo lagu ogaanayo Xildhibaanku qofka uu u codeeyey.
February 4, 2017 - By: Hussein Farah
Maalinta Arbacada ah ee todobaadkan waxaa Soomaaliya ka dhacaysa doorashada Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya. Madaxweynaha waxaa dooranaya Xildhibaano ka badan 320 oo kamid ah 329 mudane ee ay ka kooban yihiin labada aqal ee Jamhuuriyadda.
Mid kamid ah Xildhibaanada taageersan Xasan Sheekh Maxamuud ayaa si hoose Horseed Media ugu sheegay in kooxda ka socota sirdoonka Itoobiya ay qorshe cusub keeneen. Wuxuu sheegay in Xildhibaanada loo sheegay in loo qaybin doono qalab yar oo ay sawir uga qaadayaan warqadda, sawirada lagu qaado qalabkaas ayaa ku xiran Cloud Server kale oo markiiba laga arki kari qofka uu u codeeyey, qalabkan ayaa isugu jira okiyaale, Saacado device-yar oo kale Telefonka gacanta iyo weliba Qalimaan. Nidaamkan waxa aad ugu kalsoonaadey musharax Xasan Sheekh Maxamuud oo wel-wel xooggan ka qabey doorashadii shirguddoonku in ay u dhacdey si aanu dooneyn. Doorashadaas ayaa Xildhibaanada lagu amrey in ay u codeeyaan Xildhibaan Xiddig iyo Xildhibaan Faarax Sheekh Cabdulqaadir waxaa lagu amrey in ay qaataan laba teleefon mid ay iska reebaan iyo mid ay gudaha la galaan oo sawirku soo qaadaan, taas oo an u dhicin sidii la rabey, waxayna horseeday in ay ku fashilaan doorashada.
Xildhibaanka xogta siiyey Horseed Media ayaa sheegay in guddiga doorashada ay la gudboon tahay in ay wax ka beddelaan qolka Xildhibaanku codkiisa ku dhiibanaayo. Wuxuu soo jeediyey in Xildhibaanadu ku codeeyaan meel aan xirneyn oo daah lahayn iyaga oo sii jeeda dadkuna arkaayo si qalabkaas casriga ah ee ku xiran Server Cloud yaala meel kale aysan suurta gal ugu noqon in doorashada sirdoonka Itoobiya ku maamulaan.
Waxaa la is weydiinayaa doorka guddiga anshaxa iyo ilaalinta doorashadu iyo sidii ay uga hortagi lahaayeen, xogtan cusub ee sheegaysa in codbixyaashu ay qalab casri ah ku sawirayaan warqadda ay ku codeeyeen taas oo markiiba ku dhacaysa meel kale oo ka baxsan gacantiisa.